NIO CEO William Lee က: Volkswagen အမှတ်တံဆိပ် 500,000 ယူနစ် စွမ်းရည် အောင်မြင်ရန် - Pandaily
NIO CEO William Lee က: Volkswagen အမှတ်တံဆိပ် 500,000 ယူနစ် စွမ်းရည် အောင်မြင်ရန်
Jun 17, 2022, 12:55ညနေ 2022/06/17 14:05:27 Pandaily
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညတွင် တရုတ် စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူ NIO သည်၎င်း၏ ပထမဆုံး ကြီးမားသော ငါး ထိုင်ခုံ SUV ES7 ကို ယွမ် ၄၆ ၈၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၆၉, ၈၂ ၈) ဖြင့် တရားဝင် ကြေငြာခဲ့သည်။ ေစ်းႏႈန္း အေတာ္ေလး ျမင့္မား ေနေပမယ့္ NIO က ေနရာ နည္း တဲ့ အမွတ္တံဆိပ္ သစ္ကို ျမႇင့္တင္ ေန ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ကုမ္ပဏီ ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် William Lee က NIO သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဈေးကွက် သို့ အမှတ်တံဆိပ် အသစ် ကိုစတင် မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်“အလယ်အလတ် အဆင့်မြင့်” ကို အလေးပေး ။
ဝီလျံ လီက NIO သည် လက်ရှိတွင် ယွမ် ၂၀၀, ၀၀၀ ကျော် သော မော်ဒယ် များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးကို အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင် နေသည်ဟု ကြာသပတေး နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ NIO သည် မကြာသေးမီက Hefei City Government နှင့် Xinqiao စက်ရုံ အဆင့် (၂) သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ အစုလိုက်အပြုံလိုက် စျေးကွက် အတွက် အမှတ်တံဆိပ် အသစ် အောက်တွင် မော်တော်ယာဉ် ၅၀၀, ၀၀၀ ထုတ်လုပ် ရန်စီစဉ်ထားသည်။
NIO ၏ အစုလိုက် စျေးကွက် ကို ဦး တည်သည့် အမှတ်တံဆိပ် သည် Tesla3နှင့် Y တို့ကို ယှဉ်ပြိုင် နိုင်သည့် power-exchange version ကိုပေး လိမ့်မည် ဖြစ်သော်လည်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သက်သာ သည်။
သူက ဆက်ပြော သည်မှာ လက်ရှိ အစီအစဉ် အရ ဖြစ်သည်။ NIO သည္ ၂၀ ၂၄ ခုႏွစ္ ဒုတိယ ႏွစ္ ၀က္ တြင္ အစုလိုက် ေစ်းကြက္ အတြက္ အမွတ္တံဆိပ္ သစ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴး ရန္ ျပင္ဆင္ ေနၿပီး NT 3.0 နည္းပညာ မ်ဳိးဆက္ သစ္ ပါ၀င္ မည္ျဖစ္ၿပီး အဓိက ကုန္ပစၥည္း မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္း သည္ ယြမ္ ၂၀၀, ၀၀၀ မွ ၃၀၀, ၀၀၀ ၾကား ရွိ မည္ျဖစ္သည္။ ၎င်းသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော ဗိသုကာ နှင့် NIO ၏ ကိုယ်ပိုင် ဘက်ထရီ ကိုသယ်ဆောင် လိမ့်မည်။ လီက ထုတ်ကုန် သည်အလွန် ယှဉ်ပြိုင် နိုင် လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် NIO သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် စျေးကွက် အတွက် အမှတ်တံဆိပ် အသစ် ၏လုပ်ငန်း သည် ကောင်းစွာ တိုးတက် နေကြောင်း၊ အဓိက အဖွဲ့ ကိုတည်ထောင် ပြီး၊ မဟာဗျူဟာ ဦး တည် ချက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အစီအစဉ် မှာ ရှင်းလင်း ပြီး ပထမ ဦး ဆုံး ထုတ်ကုန် သည်အဓိက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှုအဆင့် သို့ရောက် ရှိနေကြောင်း ယခင်က ဖော်ပြခဲ့သည်
NIO ၏ ၂၀ ၂၂ Q1 ဝင်ငွေ သည်ယွမ် ၉. ၉၁ ဘီလီယံ ရှိပြီး ယမန်နှစ် အလားတူ ကာလက ယွမ် ၇. ၉ ၈၂ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး စျေးကွက် က ယွမ် ၉. ၈ ၀၄ ဘီလီယံ ရှိ မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ အသားတင် အရှုံး မှာယွမ် ၁. ၇ ၈၂ ဘီလီယံ ဖြစ်ပြီး ယမန်နှစ် အလားတူ ကာလက ယွမ် ၄. ၈ ၇၅ ဘီလီယံ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် စျေးကွက် က ယွမ် ၂. ၂ ၃၁ ဘီလီယံ အရှုံးပေါ် မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
Neo သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် April ပြီ လတွင် ယာဉ် ၅၀ ၇၄ စီး နှင့် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် မေလတွင် ယာဉ် ၇၀ ၂၄ စီး တင်ပို့ ခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်မေလ ၃၁ ရက်အထိ စုစုပေါင်း ပေးပို့ မှုသည် ၂ ၀၄, ၉ ၃၆ စီး အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
Aiways သည် ဒေါ်လာသန်း ရာနှင့်ချီ သော ရန်ပုံငွေ အသစ် ကိုရရှိ ခဲ့သည်
တရုတ် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ကုမ္ပဏီ Aiwei Automobile သည် တနင်္လာနေ့တွင် Chen Xuanlin နှင့် Dongbai Industrial Group (Chen 's) မှ ဒေါ်လာသန်း ရာနှင့်ချီ သော စုစုပေါင်း ရန်ပုံငွေ မှ ရန်ပုံငွေ အသစ် ရရှိခဲ့သည်။
Auto Jan 04 ဇန်နဝါရီ 7, 2022